News - Dusha sare ee xaashida galvanized waxay leedahay iska caabin adag daxalka
Dusha sare ee xaashida galvanized waxay leedahay iska caabin daxal oo xoog leh
Saxanka galvanized waa mid ka mid ah wax soo saarka shirkaddayada, shirkadeena waxay awood u leedahay inay soo saarto badeecado tayo sare leh hanaan farsamo oo wax soo saar fiican leh, waxaanan horumarinay xiriiro badan oo macaamiil ah. Marka xigta waxaan ku siineynaa hordhaca faahfaahsan ee qaababka qeexitaanka saxanka galvanized.
Dusha sare ee birta galvanized waxay helayaan iska caabin daxal oo xoog leh, waxqabadka habka wanaagsan, waana mid ku habboon wax soo saarka iyo ka shaqeynta. Si kastaba ha noqotee, hantida lagu sawirayo xaashida birta ah ee galvanized uma fiicna tan tan birta birta ah ee qabow-duuban, lakabka zinc-na waa mid aad u fudud in la burburiyo inta lagu jiro alxanka korantada. Xaashida birta kulul iyo qabow ee nolol maalmeedka waxay ku habboon tahay warshadaha wax soo saarka sida mashiinnada iyo qalabka gawaarida beeraha lagu keydiyo, keydinta hadhuudhka iyo nidaamka guddiga jiingado jiingado leh, muuqaalkeeda muuqda waa qiime jaban, iyo weliba qiime sare oo lagu daray. Sababtoo ah ka shaqeynta saxanka birta ah ee qabow ma fulinayo kuleylka, sidaa darteed ma heli doonno barta madow iyo oksaydhka birta ah ee badanaa ka muuqda kuleylka kulul, waxay dhalisaa waxqabad wanaagsan oo habsami leh, siman sare, iyo qeexidda alaabada qabow ee qabow leh sax, galvanized qabow waa galvanized koronto la kaliya 10-50g / m2, iska caabin ah daxalka ee dahaadhay zinc badan ka duwan tahay in of galvanizing kulul maquufin kulul. Qiimaha galvanized koronto ee xoojinta dhismaha sidoo kale waa ka hooseeya. Galvanized kulul waa galvanized dusha sare ee jirka bir ah xaaladaha kulul maquufin ah, ku dhegto waa mid aad u xoog badan, oo ma fududa in la dhaco. In kasta oo dhuumaha kulul ee la gashaday ay sidoo kale u muuqato ifafaalaha daxalka, waxay la kulmi kartaa farsamada, shuruudaha nadaafadda muddada dheer.
Sifooyinka badeecadaha iyo farsamooyinka waxay u baahan yihiin inay tixgeliyaan qaar ka mid ah shuruudaha dalabyada gaarka ah, sida astaamaha soo-gelinta elektromagnetic, astaamaha saxanka alloy hooseeya. Birta galvanized waxaa badanaa loo isticmaalaa hab dhaqaale iyo macquul ah oo loogu talagalay daaweynta ka hortagga miridhku. Qiyaastii kalabar wax soo saarka zinc ee adduunka ayaa loo adeegsadaa hawshan.